Ifulethi Lomndeni Elivamile e-Capivari - I-Airbnb
Ifulethi Lomndeni Elivamile e-Capivari
Capivari, São Paulo, i-Brazil
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Edson
I-Villaggio di Roma inn ingamamitha angu-600 nje ukusuka eCapivari square, evumela izivakashi zakhona ukuba zijabulele ingqalasizinda ephelele yamabha, izindawo zokudlela kanye nezinye ezikhangayo ezinikezwa yidolobha, ngemfudumalo eminingi kanye nenkonzo ehlukene. Ibhulakufesi elinezinto ezingaphezu kuka-30, indawo yokwamukela izivakashi amahora angu-24, inn ene-WI-FI, i-cable TV, i-mini-bar, ukushisa kweshawa okumaphakathi nompompi, i-heater, isevisi yasendlini, indawo yokupaka egadwa amakhamera.
I-Villaggio di Roma inn ingamamitha angu-600 nje ukusuka eCapivari square, evumela izivakashi zakhona ukuba zijabulele ingqalasizinda ephelele yamabha, izindawo zokudlela kanye nezinye ezikhangayo ezinikezwa yidolobha, ngemfudumalo eminingi kanye nenkonzo ehlukene. Ibhulakufesi elinezinto ezingaphezu kuka-30, indawo yokwamukela izivakashi amahora angu-24, inn ene-WI-FI, i-cable TV, i-mini-bar, ukushisa kweshawa okuma…
ubusuku obungu-7 e- Capivari
4.69 (izibuyekezo ezingu-36)
Avenida Washington Luís, 83 - Capivari, Campos do Jordão - SP, 12460-000, Brazil
Indlu yezihambi ingamamitha angu-600 ukusuka ezitolo nasezitolo zokudlela zeCapivari centrinho, okukwazi ukuhamba ngezinyawo ngaphandle kwesidingo semoto. Indlu yezivakashi nayo ingamamitha angu-300 ukusuka eCampos do Jordão Events Centre (Market Plaza).